Daabulidii xerada Yarmouk oo la hakiyay - BBC Somali
Daabulidii xerada Yarmouk oo la hakiyay
Daabulidii la qorsheeyay ee dagaalyahanada falaagada Suuriya iyo qoysaskooda ee laga soo qaadayay xerada qaxootiga Yarmouk ee koonfurta Dimisheekh, ayaa la hakiyay.
Basas waaweyn, ayaa horay u yimid xerada si ay u qaadaan dagaalyahanada oo ay ku jiraan kuwa badan oo ka tirsan kooxda IS iyo jabhadda Al-nusra, iyagoo la geynayo qeybo ka mid ah dalka oo ay kooxahaasi maamulaan. Taa badalkeeda, ayey Qaramada Midoobay awoodeysaa inay qeybiso badi gargaarka ay u baahan yihiin kuwa halkaas ku xayirmay.
Waxaa jira warar iskhilaafsan oo ku saabsan sababta uu uguuldareystay heshiiska ay dhex dhexaadineysay Qaramada Midoobay. Dadka qaar, ayaa sheegaya in dhimashada taliye sare oo falaagada ah, Zahran Alloush, oo ku dhintay duqeynta cirka ay keentay in heshiiska laga noqdo. Kuwa kalena waxay sheegayaan sababo dhinaca sahayda ah.